Jobo vita amin'ny akorandriaka | Rova Caviar Madagascar
Jobo vita amin’ny akorandriaka
Kojakoja sarobidy ho an’ireo tena mpankafy
Ny 6 isa
Jobo vita amin'ny akorandriaka Isany
Kojakoja mihaja sy natoraly, tsy azo ihodivirana amin’ny fihinanana sy fankafizana ny Rova Caviar ny lovia jobo Rova Caviar, vita amin’ny akorandriaka.
Akora mihaja avy eto Madagasikara no nanamboarana azy, ary hitondra anao hiditra ao anatin’ny tontolo tsy manam-paharoa sy feno misterin’ny sakafo haitraitra mampiavaka ny Ranomasimbe indiana.
Rakitsoa miavaka avy amin’ny natiora ity kojakoja ity ary tsy manan-tsahala ny vilia jobo tsirairay. Araka izany, mety hisy fahasamihafana kely ny endriny sy ny lokony.
Ireo jobo vita amin’ny akorandiraka dia natao tao anatin’ny paosy vita amin’ny landihazo sy volory amin’ny lokon’ny trano mba hanome anao traikefa amin’ny fanandramana.
Jobo 8,5 cm
Jobo 9,5 cm
Jobo 10,5 cm
Amin'ny Stripe na Paypal
Fankatoavana ara-pahasalamana sy ny fahasalaman'ny biby
Chronofresh ao anatin'ny 24/48H, manaja ny hatsiaka
Ny famerenana ny entana
Fanakalozana sy famerenana ny entana
Teny manokana sy kitapo Rova Caviar